Clipcentric: Imithombo yeendaba ecebileyo kunye noLawulo lweNtengiso yeVidiyo | Martech Zone
Clipcentric inika abasebenzisi bayo ukhetho olubanzi lwezixhobo kunye neetemplate ezinikezela ngolawulo olupheleleyo kuwo onke amanyathelo enkqubo yemveliso ekhokelela ekuphenduleni ngokwenyani kweqonga leendaba zentengiso. Amaqela entengiso anokuyila ngokukhawuleza kwaye aphuhlise iintengiso ezinamandla ze-HTML5 ezisebenza ngaphandle komthungo kuyo nayiphi na imeko.
Tsala kwaye ulahle indawo yokusebenzela -Ukutsala ngokutsala kunye nokulahla izinto zentengiso kwiindawo ezithile zomsebenzi kulawulo olupheleleyo, kwaye apho ubonayo kuko okufumanayo.
Ukugunyaziswa kwe-HTML5 -Ukuvelisa kuphucukile HTML5 oopopayi besebenzisa amaxesha abekiweyo kunye namagama aphambili, agqityiwe ngezenzo, iindawo zokuhlala kunye nonxibelelwano namanye amacandelo entengiso.
Inkqubo yoyilo -Ukulawula ukwenziwa kwe-in-situ usebenzisa imigaqo yedatha yomthengi echazwe ngexesha lokwakha intengiso okanye njengoko kuchaziwe lixesha lokwenyani lwangaphakathi okanye lwangaphandle.
Gqibezela ubhetyebhetye -Yakha nayiphi na ifomathi yentengiso, ukusuka kwifomathi esisiseko yeetemplate ukuya IAB Ukunyuka kweenkwenkwezi kwiifomathi zakho ezingaphandle kwebhokisi, kwaye unokuzithemba ukuba bakulungele ukusebenza ngokuthembekileyo kuzo zonke izixhobo.
Iifomathi zibandakanya i-banner, eyandisiweyo, edadayo, kunye neentengiso zephepha lodonga ezakhelwe iselfowuni, ithebhulethi, idesktop, i-in-app, i-HTML5 kunye neqonga levidiyo.
I-Clipcentric isusa iindleko kunye nezithintelo ezinobunzima ezinxulunyaniswa nemithombo yeendaba etyebileyo kunye nevidiyo, ivumela abathengi bethu ukuba bavelise ngokukhawuleza kunye nokunyanzela izibhengezo zentengiso ngaphakathi, zixhaswe ngokurhweba ngokurhabaxa kunye nezixhobo zokunika ingxelo.
I-studio yeVidiyo yeVidiyo ixhotyiswe ngokurhuqa kwaye ulahle umhleli wexesha elinika abasebenzisi ubhetyebhetye bokulawula yonke imiba yentengiso yevidiyo. Ngenisa umxholo wevidiyo kwaye wenze ngokwezifiso intengiso ngemizobo eshukumayo, isandi kunye nomculo. Yenza intengiso kwasekuqaleni usebenzisa idathabheyisi yeevidiyo zeeklip kumashishini amancinci ukuya kwaphakathi.
Iimpawu zeVidiyo yeAd
Umhleli wexesha leClip-centric -Ukukhawuleza kunye nemveliso yevidiyo elula enonxibelelwano eyenzelwe ukwakha intengiso. Tsala umxholo wakho kumgca wexesha emva koko ucofe ukujonga nokuziva.
Indawo yogcino lwedatha -Fikelela kwilayibrari yethu yeeklip zevidiyo, iingoma zomculo, iziphumo zesandi, kunye nemizobo eshukumayo ukuvelisa ixabiso leemveliso eziphezulu ngaphandle kwenkcitho yemveliso.
Isiphumo Flexible -Ngaphandle komthungo faka iividiyo zakho kwintengiso yemithombo yeendaba osisityebi, sebenza kumgca we-VAST abadlali bevidiyo abathobelayo okanye ukugcwala kwizikhululo zikamabonwakude.
tags: clipcubeiintengiso zevidiyo ezandisiweyoiintengiso zevidiyo ezidadayoKwi-banner yeentengiso zevidiyoIntengiso yemithombo yeendabaintengiso yemithombo yeendabaukuveliswa kweentengiso zevidiyozevidiyoIintengiso zephepha lodonga